Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Detox ụlọ maka mmanya na -egbu
Obi abụọ adịghị ya na ọ dị mkpa imeri ihe riri ahụ nke na -emebi ndụ ma mebie atụmatụ niile. Agbanyeghị, mgbe ụfọdụ, ọ na -esiri gị ike ịnọnyere ndị ọbịa ebe ụlọ na ikuku nke ụlọ. Ọ dabara nke ọma, enwere mmemme mmezigharị, nke na -ejikọ ike nkwado ezinụlọ na enyemaka ọkachamara.
N'ọgụ megide ahụ riri ahụ, nsị ụlọ bụ ohere nye ọtụtụ.
Emere nke a site na sistemụ nsị mmanya na -egbu egbu nke gụnyere ọgwụ edepụtara yana ndụmọdụ ekwentị na ndị ọkachamara ụlọ ọgwụ.
Ndị GP, ndị na -agwọ ọrịa na ndị nọọsụ nwere ike ịnweta 24/7 iji nye nduzi, ịga n'ihu, nkwanye, ma ọ bụ naanị nkwado.
Nhọrọ nke mmanya na -egbu egbu n'ụlọ bụ ohere zuru oke ịlụ ọgụ megide ahụ riri ahụ na -ezere ịdaba na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Ọdịiche nke Mmemme Detox ụlọ
Ọ dị mkpa iburu n'uche na nrụzigharị ụlọ anaghị adabara onye ọrịa ọ bụla. Tupu nrụzigharị amalite, ndị ọkachamara ga -eme nyocha, nyocha, wee nyochaa ọnọdụ n'ozuzu ya.
Naanị mgbe ahụ, ọ bụrụ na ndị ọkachamara akọwapụtaghị ihe riri ahụ dị ka nke siri ike, ọ ga -ekwe omume ịnye nsị ụlọ.
Otu ụlọ ọgwụ rehab kacha mma na UK Serenity ( https://www.rehabclinic.org.uk/locations/drug-alcohol-rehab-clinic-london/ ) na -enye ụdị ị alcoholụ mmanya na -aba n'anya abụọ - ụlọ ọgwụ na ụlọ ọgwụ (detox ụlọ).
Ụlọ Ọrụ Mmebi Ahụ Ahụ Serenity na -ebu sistemụ detox mmanya, nke gụnyere ịre ọgwụ edepụtara yana ndụmọdụ ekwentị na ndị ọkachamara ụlọ ọgwụ.
Echela na n'ụlọ, onye ọrịa na -anọ naanị ya. Ndị ọkachamara Serenity, dị ka GP, ndị na -agwọ ọrịa, na ndị nọọsụ, nwere ike ịnweta 24/7 iji nye nduzi, ịga n'ihu, nkwanye, ma ọ bụ naanị nkwado. Ọzọkwa, ha na -achịkwa usoro ihe omume ọ bụla ma soro ọganihu ya.
Kedu ihe kpatara ị ga -eji họrọ Mmemme Ọpụpụ Ọrịa Serenity
Uru nke Serenity home detox rehab:
Mmemme nke usoro 12
Mkparịta ụka ekwentị na nnọkọ ọgwụgwọ
Atụmatụ nri na atụmatụ nri
Ịnweta klaasị nke ndị ọkachamara na-a addictionụbiga mmanya ókè
Ọgwụ iji jikwaa mgbaàmà mwepụ
Ọzọkwa, tụlee na nrụzigharị ụlọ dị ọnụ ala karịa ọgwụgwọ ụlọ ọgwụ.
N'ezie, nsị ụlọ na -egosi oke nnwere onwe na ibu ọrụ nke onye ọrịa. Ọ bụrụ na enwere obi abụọ banyere akọ na uche nke onwe gị, ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịmalite site na mgbake n'ụlọ ọgwụ wee jiri nwayọ kwaga ọgwụgwọ dịpụrụ adịpụ.